Faallo: Burburka Giniga Istarliinka iyo mugdiga dhaqaalaha Britain. – Kasmo Newspaper
Faallo: Burburka Giniga Istarliinka iyo mugdiga dhaqaalaha Britain.
Updated - June 13, 2017 8:00 pm GMT
Laga soo bilaabo Aftidii Brexit, 2016kii ilaa Doorashadii Khamiistii, 8dii Juun, Giniga Istarliinku wuxuu lumiyay 15%, sicir-bararkuna wuxuu marayaa 2,9%, dadkuna waa sii cayrtoobayaa. Wada-hadalladii Yurub ee dhaqaaqi la’ waxay halis ku hayaan £184 Bilyan oo loo dhoofin lahaa suuqa Yurub.
London (Kasmo), Mashaqooyinka Britain isu kaashaday waa badanyihiin: Barlamaan an aqolabiyad haysan, Wada-xaajoodkii Brexit (ee ka bixitaanka Midowga Yurub) oo hadda u muuqanaya sheeko an dhammaad lahayn iyo argagixiso soo badanaysa.
Suuqyadu waligoodba ma jeclayn Theresa May, waxayse rajaynayeen in ay guulaysato, si ay u helaan in yar oo xasillooni iyo badeecooyin ah, kuwaas oo gabaabsi noqday marxaladdaan taariikhiga ah.
Laakiin Conservative-ku way ku khasaareen doorashadii, waxayna heleen 318 kursi oo ka yar 12 tiradii ay Barlamaankii hore haysteen, taas oo wali ka hooseysa 8 kursi aqlabiyaddii looga baahnaa si ay xukuumd u soo dhisaan kaligood.
Xaaladda noocaan ah, xukunka ku dhacaya Giniga Istarliinka wuu iska sii caddaa: maalintii 9ka Juun wuxuu hoos uga dhacay 2% qiimihii uu lahaa 24 saac ka hor oo ahayd maalintii doorashada. Sheekadu-se waxay u badantahay in subixii ka dambeeyay maalintii Aftidii Brexit oo qur ah arrimaha dalkani bilaabatay in ay sii xumaadaan.
Ku dhowwad 1 sano ka dib Aftidaas, Giniga Istarliinku wuxuu lumiyay qiyaastii 15% qiimihiisii: daciifnimo, bilihii dambe oo idil ku dhacaysay giraangirta wareejisa dhaqaalaha Britain. Marka la eego kororsiimada wanaagsan ee wax-soosaarka gudaha GDP sannadkii 2016 (+2%) waxaa sare u kacay wax-dhoofinta, taas oo ay ugu wacnayd in Britain wali ka sii mid ahayd hannaanka ganacsiga Midowga Yurub.
Iyada oo an laga hadlin £60ka Bilyan ee “Bank of England” ku kabay dhaqaalaha oo durba ka muuqatay kororka (+3%) saamilayda wax dhoofinta. Laakiin marka baraarahaas lama filaanka ah oo idil lagu daro qiime-dhaca lacagta waxay kordhisay sicir-bararkii oo hadda maraya 2,9%, kaas oo saboolteeyay, muddooyinkanba, reer Britain, qoysas iyo shirkadaba.
Daraasd laga sameeyay BDO (Binder Dijker Otte), Shabakad Caalami ah oo Hanti-dhowrka & Talabixinta Canshuuraha, faraceeda Uk, waxaa hoosta looga xarriiqay hakad ku dhici kara wax-soosaarka oo halis ah. Daraasaddaas waxaa ku jira dhamman su’aalaha an hadda laga jawaabi karin iyo kuwa ka soo socda gudaha Britain, oo waliba lagu daray kuwa ka soo yeeraya dibadda oo an la sii hubin, sida Brexit.
Wada-xaajood socday 4 bilood ka dib ma jirto tillaabo qur ah oo dhinacyadu horey u qaadeen, xitaa Ajendihii miiska looga hadli lahaa kol ay tahay. Xukuumad daciif ah, sida ay la tahay hawlwadeennada, waxay dhinac daciifin kartaa codsiyada Britain, kuna riixi kartaa in ay aqbasho Soft Brexit, marka la fiiriyo muwqifyada adag ee la kala taaganyahay.
Laakiin daciifnimada Theresa May qudheeda waxaa laga yaabaa in ay qaybo ka tirsan Conservative-ka ku khasabto in ay kacaan, kuna dirqiyaan R/Wasaaraha in ay guntiga adkaysato. Taasina waxay keeni kartaa oo qur ah in wax waliba halkooda yuururaan oo ayan ka dhaqaaqin, waana wax an cidina dani ugu jirin.
Wakhtigan xaadirka ah, kor-joogtada oo idil waxay ku qanacsantahay in Theresa May ayan ahayn siyaasiga ku habboon furdaaminta geeddi-socodka Brexit, wax kale ma ahan ee waxaanay haysan fursadihii ay ku samayn lahayd farsamooyin ay ku badbaadiso danaha Jasiiradda.
Daraasad laga sameeyay CEPS (Centre for European Policy Studies), kala tagis xanuun leh waxay Britain ugu kici kartaa hoos-udhac 1 dhibic ah oo Wax-soosaarka GDP sannadkii. Waxaa halis galaya £184 Bilyan oo loo dhoofin lahaa suuqa Yurub, oo u dhiganta 7,5% wax-soosaarka GDP ee Britain, iyo waliba xaqiiqada dhaqaale iyo maaliyadeed ee caalamiga ah.